Uphengululo lwasekhaya lwePod mini: encinci kodwa iyangcungcuthekisa | IPhone iindaba
Uphengululo lwasekhaya lwePod Mini: incinci kodwa iyangcungcuthekisa
ULuis Padilla | | IPod Home, Ezahlukeneyo
U-Apple ukhuphe i-HomePod mini ekudala ilindelwe, Inguqulelo encinci ye-HomePod yoqobo eyothusa ngokusebenza kwayo kunye nomgangatho ongalunganga wesandi Isithethi sobungakanani kunye nexabiso laso. Siyivavanya kwaye sikuxelele ngayo.
1 Ukulungisa ingxaki yePodPod yasekhaya
2 Uyilo kunye neenkcukacha
3 Mamela umculo
4 IKhaya lasekhaya kwimoto encinci yasekhaya
6 Umgangatho wesandi esimangalisayo
7 Ubhejo omkhulu ovela kuApple
Ukulungisa ingxaki yePodPod yasekhaya
Yaziswa malunga neminyaka emithathu edlulileyo, i-HomePod sisithethi esinconywayo kwasekuqaleni ngomgangatho waso, kodwa sikwagxekwa ngexabiso laso. Ifikile eSpain phantse unyaka kamva nge-349 euros, ixabiso elathi kamva lancitshiswa laya kwi-329, eyayibeka kuluhlu oluphezulu lwezithethi. Olu luhlu aluzange lufaneleke, kuba umgangatho walo wezandi uqinisekisile, kodwa ixabiso layo lishiya ngaphandle kwintengiso kubasebenzisi abaninzi, kwaye ke yashiya iApple ngaphandle kwezithethi ezilungileyo njengoko kwakungekho enye indlela. Isandi esikhulu, embindini weKhayaKit, umncedisi odityanisiweyo odibeneyo, nazo zonke izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga zeSiri, ukudityaniswa okugqibeleleyo kwinkqubo ye-Apple ecosystem… kodwa ngexabiso eliphezulu.
Kube lixesha elide, uSiri ephuculwe kwaye iApple ivule iKhaya lasekhaya kwizicelo zomntu wesithathu kunye neenkonzo, ezenze i-HomePod ibe sisixhobo esinomtsalane ngakumbi, kodwa enye into efikelelekayo ngakumbi yabonwa njengeyimfuneko, kwaye emva iinyanga ezininzi zamarhe u-Apple uyikhuphile i-HomePod mini. Esi sithethi sincinci sisombulula zonke iingxaki ezivela kwi-HomePod yoqobo, kuba Ngokugcina yonke imisebenzi ye-HomePod igcwele, ixabiso layo lincitshisiwe laya kwi-99, kwaye nangona umahluko wesandi ucacile (kwaye unengqiqo), umgangatho wayo uphezulu kunezinye izithethi ezifanayo ngobukhulu kunye nexabiso.
I-Apple iyitshintshile le fomu, kodwa igcina imeko yayo. I-HomePod mini yindawo encinci ethe tyaba ziipali, zigutyungelwe ngelaphu elifanayo njengomntakwabo omdala. Ngaphezulu sinomphezulu wokuchukumisa osebenza njengolawulo lomzimba, kunye nee-LED ezikhanyayo ezibonisa amazwe ahlukeneyo (ukudlala kwakhona, umnxeba, uSiri, njl. Ngaphakathi kukho Umguquleli opheleleyo opheleleyo kunye neerediyitha ezimbini eziziimowudi, yahluke kakhulu kwi-HomePod yoqobo, kunye nee-microphone ezine zokukhetha ilizwi lethu. Iprosesa ye-S5 (efanayo naleyo yeApple Watch Series 5) inoxanduva lokuhlalutya isandi amaxesha angama-180 ngomzuzwana ukusoloko sinika esona sandi silungileyo.
Unxibelelwano lwayo yiWiFi (2,4 kunye ne5GHz), kwaye nangona ineBluetooth 5.0 ayinakusetyenziselwa ukuthumela isandi, kodwa phantse akukho mntu uyikhumbulayo le nto, into egxekwa kakhulu kwimodeli yoqobo. Umgangatho wesandi kunye amathuba anikezelwa yi-WiFi kunye ne-Apple's AirPlay 2 protocol yiminyaka elula ukusuka kwinto esinokuyenza ngeBluetooth, kwaye ukuba siyafuna ukusebenzisa i-HomePod ngaphandle kwe-intanethi, sinokuyenza ngaphandle kwengxaki. Ikwabandakanya i-chip ye-U1 esiya kuthi kamva siyityhilele ukuba yeyantoni, kwaye iyahambelana ne-Thread, umgaqo-nkqubo omtsha oya kuphucula unxibelelwano lwezixhobo zasekhaya esizisebenzelayo ekhaya.
Undoqo wesithethi ngumculo, nangona izithethi ezikrelekrele lo msebenzi unokubonakala ngathi uyintsalela. Ukusukela oko ugqiba ukuseta i-HomePod, ethatha nje imizuzwana embalwa, ungaqala ukonwabela umculo wakho. Kulula kakhulu ukuba une-Apple Music, ewe, kuba awuyi kuyidinga i-iPhone yakho konke konke. Ungacela uSiri ukuba adlale ii-albhamu zakho ozithandayo, uluhlu lokudlala, okanye izitishi zesiko ngokusekwe kubaculi obathandayo. Ukuba usebenzisa enye inkonzo yomculo yokusasaza, iindaba ezimnandi zezokuba iApple sele iyivulile iPodPod ukuze idityaniswe, nangona konke oko kuya kuxhomekeka ukuba zeziphi iinkonzo ezifuna ukuyenza. Ngokuqinisekileyo ucinga ngeSpotify, ebikhala ngeenxa zonke kwiikona iinyanga kuba ayinakudityaniswa kwiPodPod yasekhaya, ke kulindeleke ukuba kungathathi xesha lide ukuba ihambelane.
Ukuba ufuna ukumamela umculo kwinkonzo engahambelaniyo, ungayenza ngaphandle kwengxaki, kodwa kufuneka uyenze kwi-iPhone yakho, i-iPad okanye iMac kwaye uthumele umculo nge-AirPlay. Ayisiyongxaki inkulu, kodwa loo milingo yokudityaniswa iApple Music ilahlekile. I-AirPlay 2 ikwavumela ukuba usebenzise izithethi kumagumbi ahlukeneyo ngaxeshanye (multiroom), sibalawula bonke ngokungathi babemnye, umculo ulungelelaniswe ngokugqibeleleyo, okanye uthumele ii-audios ezahlukeneyo kulowo nalowo kubo. Kukwakho nethuba lokudibanisa ii-minis ze-HomePod ezimbini ukwenza istereo, ukuphucula kakhulu amava okuphulaphula. Into ongenakuyenza kukudibanisa i-MiniPod mini kunye nePodPod, ewe. Ukongeza, ngoku iApple TV ikuvumela ukuba uchaze iziphumo zomsindo kwiKhayaPod, eyongeze ukungqinelana neDolby Atmos inokuguqula i-HomePod mini yakho ibe sisisombululo esihle kwisandi sikamabonwakude, ngaphantsi kwe- € 200.
U-Apple uphucule into ayongeze kutshanje kwi-HomePod yoqobo-ukusasaza iaudiyo evela kwi-iPhone. Ngokuzisa i-iPhone phezulu kwi-HomePod, iaudio omamele kuyo kwi-smartphone yakho iya kudluliselwa kwisithethi, ngaphandle kokwenza nantoni na. Injalo ithiyori, kwaye xa isebenza ngumlingo, kodwa xa usenza oko isilela rhoqo. Imoto encinci yasekhaya ibandakanya i-chip ye-U1, njengoko kunjalo nge-iPhone 11 kunye neemodeli kamva. Ndiyabulela koku, ukuhanjiswa ekugqibeleni kuyinyani ye-99,99% yexeshaMane uzise umphezulu we-iPhone kufutshane ne-miniPod yasekhaya, kwaye iaudiyo iya kusuka kwi-iPhone iye kwi-HomePod okanye ngokuchaseneyo akukho xesha.
IKhaya lasekhaya kwimoto encinci yasekhaya
Omnye wemisebenzi yeKhayaPod elingenanto yakwenza nomculo yindawo yokufikelela kwiKhayaKit. Le yimeko ye-MiniPod mini nayo, eneneni liziko elinexabiso eliphantsi onokulithenga ngoku, kwaye unomdla Kwakhona iyunithi efanelekileyo yokulawula onokuyithenga ngoku. I-Apple yongeze inkxaso ye-Thread protocol yokuphucula unxibelelwano lwezixhobo zeKhayaKit, ukuze ulibale malunga neebhlorho kunye nokuphindaphinda ukulungisa imiba yokugubungela.
Unxibelelwano lwePod Mini kunye ne-Thread: khohlwa malunga nokuphindaphinda kunye neebhlorho
Ukulawula iKhaya laseKhaya ngeKhayaPod ngamandla amakhulu kaSiri. Inkqubo yokuseta iApple ayinakuze ibenako ukhuphiswanoNjengokuba uyithenga into oyithengayo, ukuba inesatifikethi seKhayaKit iya kusebenza ewe okanye ewe, kwaye ngendlela efanayo nayo nayiphi na enye into, into (eyam) yingxaki enkulu kwiAmazon neAlexa. Akukho zakhono apha, awunyanzelekanga ukuba ulinde umphuhlisi ukuba amisele inguqulelo yeSpanish, akukho zimanga. Ukuba imveliso inetywina le "HomeKit", iyakusebenza nje. Kwaye uSiri kulawulo lwe-automation yakho yasekhaya uzalisekisa ngokugqibeleleyo. Singaphikisana ngokuba ngowuphi oyena mncedisi uphambili, oyena mntu uxela ezona joke zibalaseleyo okanye odlala naye owona mdlalo ungcono, kodwa xa kufikwa kumba we-automation… akukho mbala.
USiri unemisebenzi yokuncedisa, kwaye naku ikwenza umsebenzi wayo kakuhle, ukuba unayo i-iPhone, ewe. Sebenzisa iinkonzo ze-Apple ngokuzenzekelayo kwenza uSiri abe nokufikelela kwikhalenda yakho, amanqaku, izikhumbuzo, abafowunelwa, njl.. Uyakwazi ukwenza iminxeba, uyiphendule, uthumele imiyalezo, uyazi imozulu, ucwangcise indlela eya emsebenzini, wenze uluhlu lwakho lokuthenga ... Yonke le yimisebenzi ekuqaleni ongayisebenzisiyo kwiPod yasekhaya, de ibe nye Mhla ubazama kwaye uziva ukhululekile ukusebenzisa iSiri kuyo. Ewe, kufuneka sivume ukuba xa siphuma kule misebenzi ndiyikhankanyileyo, uSiri usemva kolu khuphiswano: ngekhe uthengise ipitsa, okanye uthenge amatikiti kwi-cinema, kwaye awunaku-odola iziqholo ozithandayo eAmazon, okanye udlale iTrivia Ukusukela. Ukuba le misebenzi ibalulekile kuwe, jonga ngaphandle kweApple, kuba awuyi kuyifumana apha. Kodwa emva kweminyaka emalunga ne-3 ndisebenzisa i-HomePod, nangaphezulu kwesibini sineeAmazon Echos ezininzi ekhaya (ngaphantsi nangaphantsi), ukukhathazeka kwam ne-Alexa kukhulu kakhulu kuneSiri, umcimbi wokuziqhelisa.
Umgangatho wesandi esimangalisayo
Ngoku lixesha lokuthetha ngesandi se-MiniPod yasekhaya, amandla ayo amakhulu. Ukuba awunaso isithethi esifana nePod yasekhaya okanye into efanayo ekhaya, uya kumangaliswa sisandi. Ukuba sele unayo i-HomePod kwaye usetyenziselwe umgangatho wayo, ngokucacileyo ukumangaliswa kuya kuba kuncinci, kodwa kuya kubakho. Kuba incinci kangakanani, umgangatho wayo onesandi ubalasele. Ayinakuthelekiswa nePod yasekhaya, nokuba ikufutshane, kodwa yamandla, ama-nuances, i-bass ... le mini yePod Home ayizukuphoxa. Nokuba umthamo u-100%, ucebisa uSiri ngokwakhe xa ubuza, akukho kugqwetha, "akukho peta" njengoko unyana wam esitsho. Ngokuqinisekileyo kuloo mthamo awuyi kukwazi ukubamba, okanye ummelwane wakho. Amandla esi sithethi makhulu, ii-bass zibalulekile kwaye nangona ungaqapheli ukuba "ubuninzi bezinto ezingafaniyo" zeKhayaPod, uyakwazi ukulawula ukwahlula amazwi, izixhobo kakuhle ... nangona singaze silibale ukubona ubungakanani bazo kunye nokusikelwa kwabo okucacileyo.
Ubhejo omkhulu ovela kuApple
I-Apple efanayo esusa itshaja kwi-iPhone exabisa ngaphezulu kwe- € 1000 iyakwazi ukumilisela isithethi esikumgangatho ongama-99 euros kuphela, kwaye ibandakanya itshaja ebhokisini. Zeziphikiso zakudala le nkampani esiyiqhelileyo, kwaye ebonisa ukuba ukubheja ekwenzileyo ngale MiniPod mini kukhulu kakhulu, ukuyenza ibe yenye yeemveliso ngexabiso elifanelekileyo lemali kwikhathalogu yonke yenkampani, nkqu nakwiimarike singahamba ukuya kuthi ga ngoku. Ukuba ungumsebenzisi we-iPhone, ukuba ufuna ukuqala nge-automation yasekhaya, okanye ukuba uthanda nje umgangatho wesandi kwisithethi, le MiniPod mini kunzima kakhulu ukuyichasa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » IPod Home » Uphengululo lwasekhaya lwePod Mini: incinci kodwa iyangcungcuthekisa
I-Apple iguqula i-iOS 14.2 ngohlobo olongeza utshintsho kwabo bangakhange bahlaziye
Inkqubo ye-Gmail yamkela iiwijethi